रोबर्ट फुल्टन - Safal Stories
Home Motivational Biographies Science And Technology रोबर्ट फुल्टन
असफलता जीवनमा सिक्नको लागि पाठ र बलियो बन्नको लागी आहार हो
रोबर्ट फुल्टन प्रशिद्ध इन्जिनियर हुन्। जीवनमा दु:ख निम्त्याइदिने विभिन्न पारिवारिक घटना र आफ्नै अल्पायुको बावजुद पनि उनले जीवनमा सफलता हासिल गरेर विश्वसामु चिनिएका छन् । उनको जन्म सन् १७६५, नोभेम्बर १४ मा भएको थियो।
रोबर्ट फुल्टन अमेरिकामा जन्मिएका थिए । उनका बाबु कृषि काम गर्थे तर रोबर्ट छ वर्षको हुँदा उनीहरुको खेतबारी मासियो। त्यसको तीन वर्ष पछि फेरी उनका बुवाको मृत्यु भयो। उनले सुरुवाती पढाई घरमै गरे र केही वर्ष पछि मात्र विद्यालय भर्ना भएका थिए ।
रोबर्ट फुल्टनले फिलाडेल्फियाको एक सुन पसलमा काम गर्न थाले जहाँबाट उनलाई डीजाइनिङ्ग सम्बन्धि ज्ञान लिने मौका मिल्यो । त्यसैक्रमममा उनको भेट क्रान्तिका योद्धा मानिने व्यक्तिहरुसंग भयो र उनि सन् १७८७ मा लन्डन गए । त्यहाँ रहंदा उनले चित्रकार बेन्जामिन वेस्टसंग चित्रकारिता सिके र केही चित्रहरु पनि कोरे । तर उनले आफू त्यस कार्यमा सधै रम्न नसक्ने र सफल हुन नसक्ने आंकलन गरे। त्यसपछि रोबर्ट क्यानल इञ्जिनियरिङ्ग तिर लागे । सन् १७९६ मा उनले “ट्रीटाइज अन द इम्प्रुभ्मेंट अफ क्यानल नेभिगेसन” प्रकाशित गरे र जल यातायात सम्बन्धि मेसिनहरुको अनुसन्धान र डिजाइन र आविष्कारमा लागे ।
सन् १७९७ मा रोबर्ट पेरिस पुगे । त्यहाँ उनले बेलायतसंगको युद्धमा फ्रान्सलाई सबमरिन प्रयोग गर्न सुझाव दिए तर फ्रान्स सरकारले अस्विकार गर्यो। सन् १८०० मा उनले आफैले खर्च गरेर आफ्नो डिजाइनको सबमरिन बनाए तर त्यसले राम्रो संग काम गर्न सकेन । त्यसपछि सन् १८०१ मा रोबर्ट आर. लिभिङ्गस्टोन संग मिलेर बनाएको ‘स्टिमबोट’ पनि डुब्यो । सन् १८०४मा रोबर्ट बेलायत पुगे र त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले उनलाई सामुद्रिक मिसाइल बनौन लगाए । आफ्नो लक्ष्यमा अडिग उनि त्यसपछि न्युयोर्क गए र स्टिमबोट बनाए जुन ३२ घण्टामा १५० माइल यात्रा गर्न सक्थ्यो ।
रोबर्ट फुल्टनले स्टिमबोटको परिक्षणमा पाएको त्यो सफलता पछि सन् १८०७ मा रोबर्ट र. लिभिङ्गस्टोन संग मिलेर व्यवसायिक स्टिमबोट बनाए जुन न्युयोर्क सहर र अल्बानी, न्युयोर्क बिचको नदीमा यात्रा गर्न थाल्यो । त्यसपछि उनले नयाँ डिजाइनमा नयाँ डुंगाहरु बनाउन थाले। सन् १८११ मा उनि इरि क्यानल कमिसनको सदस्य भए जुन सदस्यता उनको मृत्युसम्म पनि रहेको थियो। त्यसपछि उनले अमेरिकाको लागि युद्ध-पानीजहाजको डिजाइन गरेका थिए ।
रोबर्ट फुल्टनको कथा बिबिसीले विभिन्न कार्यक्रममा देखाउने गरेको छ । स्टिमबोटका जन्मदाताको रुपमा उनलाई धन्यवाद स्वरुप एक ब्याण्डले गीत समेत निकालेको थियो । न्युयोर्कमा उनलाई स्टिमबोटका कारण अझै पनि विशेष सम्मान व्यक्त गरिन्छ । विभिन्न ठाउँमा उनको शालिकहरु पनि राखिएको थियो ।
सम्झनुहोस् त , मान्छे हिंड्दा हिंड्दै लड्यो र लडेर आफू उठेन भने के हुन्छ? जो-कोहीले उसलाई कुल्चिन सक्छ, उसको काम अथवा पाईला रोकिन्छ, संगै हिंडिरहेकाहरु छुट्छन् । असफलताबाट हार खानु पनि त्यस्तै हो । यदि तपाईं उठ्ने हिम्मत गर्नुभो भने, लागेको चोटले विस्तारै हिंड्नुहोला तर पछि त अवश्य त्यो चोट निको हुन्छ र त्यसले तपाईंको सहनशीलता, चोटसंग जुध्न सक्ने हिम्मत बढाउँछ, तपाईं आफू लडेको ठाउँमा अर्को पटक देखी सतर्क भएर हिंड्न थाल्नुहुन्छ अथवा लड्नुको कारणको समाधान निकाल्नुहुन्छ । रोबर्ट फुल्टनले आफ्नो असफलताबाट हार खाएर सपना बिर्सिएको भए उनको नाममा आज कसैले गीत गाउँदैनथ्यो ।
Previousलाखौँ डलर आम्दानीको पेशा छोडेर हजारौं भविष्य सपार्न निस्केका शिक्षक
Nextसाहस, लगन र आत्मविश्वासको एक उत्कृष्ट उदाहरण